ZIPHINDE ZADALA UMONAKALO OMKHULU IZIKHUKHULA KWAZULU-NATAL - Ilanga News
Home Izindaba ZIPHINDE ZADALA UMONAKALO OMKHULU IZIKHUKHULA KWAZULU-NATAL
MKHULU umonakalo ophinde wadalwa yimvula enamandla ehambisana nezikhulula KwaZulu-Natal.
NAKUBA umkhulu umonakalo osuphinde wadalwa yizikhukhula zakamuva ezingxenyeni ezingasogwini KwaZulu-Natal, kodwa ngesikhathi sokushicilela lapha izolo ntambama, bekungakabi bikho obesekuqinisekiswe ukuthi bashonile. UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala izolo ntambama uthe nakuba besalindele umbiko ophelele, kodwa imibiko elokhu ivela ikhomba isimo esingesihle neze futhi esikhathazayo.
“Ngobusuku bangomhla zingama-21 no-22 kuNhlaba (May), isifundazwe siphinde sabhekana nesivunguvungu esibi kakhulu esihambisana nezikhukhula ezibangele umonakalo. Lezi zimvula ezinamandla zibangele ukuguguleka kwemigwaqo, izindawo zabantu zokuhlala, kwalimaza nezakhiwo. Siyaqonda ukuthi kwezinye izindawo akufinyeleleki, seziphenduke iziqhingi. Amazinga amanzi aqashwe ngeso lokhozi ezindaweni ezahlukene ezijwayele ukuba nezikhukhula ukuze kuthathwe izinyathelo ezifanele,” kusho uMnu Zikalala. Uthi njengoba senyuka isibalo sabantu abashaya izingcingo bedinga usizo, sebenxuse ukuba kutshalwe amasosha eSANDF ezindaweni ezisenyakatho yeTheku.
“Amaphoyisa kamasipala kanye nabezicishamlilo bayasiza ngokumpompa amanzi nokuvala imigwaqo ethintekile. Yinqwaba yemigwaqo ethintekile namabhuloho eThekwini, ikakhulukazi eMdloti, La Mercy nakwezinye izindawo. “Sinxusa abasebenzisa imigwaqo ukuba baqaphele futhi bahlale emakhaya uma kungenzeka,” kusho uMnu Zikalala. Kunenqwaba yabantu okubikwa ukuthi isikhishiwe emakhaya, yathuthelwa ezindaweni eziphephile, ikakhulukazi ezingxenyeni ezisenyakatho yeTheku, kanti abanye basale dengwane esifundeni Ilembe. UMnu Zikalala uqinise idolo umphakathi waKwaZulu-Natal, wathi amathimba ezimo zezinhlekelele ami ngomumo kuzona zonke izifunda. “Siyalele bonke omasipala ukuba bahlonze futhi bahlinzeke ngamahholo omphakathi azosetshenziswa njengendawo yokukhosela abantu abangenamakhaya,” kusho uMnu Zikalala.
Previous articleKusolwa imali yomshwalensi ebulawa kubuka umyeni
Next articleOmabhalane basezinkantolo sebethembe amakhosi